Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment उत्तर कोरियाले बनायो खान मिल्ने कपडा ! - Pnpkhabar.com
एजेन्सी : कपडा पनि खान मिल्छ र ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । उत्तर कोरियामा खान मिल्ने कपडाको विकास गरिएको छ । भोकमरीसँग जुधिरहेको उत्तर कोरियाले प्राण धान्न सकिने गरी खान मिल्ने कपडा बनाएको हो ।
अनौठो प्रयोग गर्न माहिर उत्तर कोरिया कहिले आणविक हतियार परीक्षणका लागि चर्चामा आउने गरेको छ । अहिले अमेरिकासँग वार्ताका लागि निकै चर्चामा रहेको उत्तर कोरियामा गरिबीको चरम अवस्था रहेको छ ।